Meriam Ibrahim oo xabsiga laga deynayo - BBC Somali
Meriam Ibrahim oo xabsiga laga deynayo
1 Juunyo 2014
Image caption Meriam Ibrahim iyo ninkeeda
Xukuumada Sudan ayaa lagu wadaa in ay xabsiga ka sii dayso haweenay lagu xukumay dil kaddib markii lagu helay dambi ah in ay isaga baxday diinta Islaamka, sidaasi waxa sheegay sarkaal ka tirsan wasaarada arrimaha dibedda.
Haweenaydaas oo la yiraahdo Meriam Ibrahim, ayaa waxay ku umushay xabsiga gudahiisa, waxay una dhashay gabar. Mas’uul ka tirsan dowladda Sudan ayaana BBC-da u sheegay in haweenaydan la sii daan doono maalmaha soo socda.
Abdullahi Alzareg, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaarada arrimaha dibedda Sudan, ayaa waxa uu intaasi ku daray in dalkiisa uu ilaaliyo xoriyadda qofka u leeyayahay in uu raaco diintii uu doono, isla markaasna ay xukuumadu badbaadin doonto haweenaydaasi.
Sudan waxa soo wajahday cambaareyn caalami ah kadib markii ay xukunka dilka ah ku riday gabadhaasi.
Waraysi uu siiyey wargayska the Times, ayuu Ra’iisal wasaaraha Britain David Cameron waxa uu xukunkaasi ku tilmaamay arxan daro, waxa uuna intaasi ku daray in xukunkaasi yahay mid aanan la jaan qaadi kareynin dunida manta jirta.
Xafiiska arrimaha dibedda ee Britain ayaa todobaadkan sheegay in uu ku cadaadin doono Sudan in ay haweeneydaasi siidayso iyadoo la eegayo bani’aadanimada.
Meriam, oo da’adeedu 27 sanno tahay, ayaa waxa lagu soo barbaariyey diinta masiixiga, balse garyaqaan reer sudan ah ayaa horraantii bishan go’aamiyey in ay tahay in loo aqoonsado haweenaydaasi qof Muslim ah sababto ah aabaheeda ayaa Muslim ah.
Waxay diiday in ay ka laabato diinta masiixiga, waxaana lagu xukumay dil.
Arbacadii la soo dhaafay waxay umushay Gabar iyadoo xabsiga ku jirta waana cunigii labaad oo ay u dhashay nin Mareykan ah oo la yiraahdo Daniel Wani.
Maxkamada ayaa sheegatay in loo ogolaan doono in ay koriso gabadheeda muddo laba sanno ah ka hor inta aanan lagu fulinin xukunkaasi dilka ah.
Maxkmada ayaa horaan waxay meesha ka saartay guurkeeda ku salaysnaa diinta masiixiga, waxaana lagu xukumay in lagu dhufto 100 karbaash oo ah xukunka shareecada Islaamka ee qofkii lagu helo sino.
Sudan waxa u badan dad Muslim ah, shareecada Islaamkana waxa laga dhaqmayey tan iyo 1980-tamaadkii.
Gabar diinta ka baxday oo dil lagu xukumay Sudan
Dhawr iyo labaatan ku dhintay muddaaharaadyada Sudan